Ngu nzima ukuva kuphela, yintoni na ungakwazi ukuyenza? Zam endizithandayo - Ividiyo incoko ye-Italy
Ngu nzima ukuva kuphela, yintoni na ungakwazi ukuyenza? Zam endizithandayo
Oku, ngokulandelelanayo, yenza lengxaki nangakumbi ezinzima
Yintoni abantu abaninzi andazi kukuba asingabo bodwa kunye zabo nemvakalelo, vumelani kuphela ukuba oku loneliness kusenokuba kugqitywe nge-ngokwaboNgelishwa, asikuko kuphela ukuba kukho akukho isisombululo ingxaki ka-loneliness.
Inokuba iinkcazelo ezahluka-hlukileyo kuba kutheni umntu abe bazive lonely, kwaye ezahlukeneyo izisombululo ukuba ingxaki. Ngenxa loneliness, abantu abaninzi bazive okokuba baya kuba ezisisiseko umnqweno ukufumana inyaniso uthando, ngeli lixa bazive powerless ukufumana oko.
Ndinovelwano yedwa kwaye ucinga ukuba uthando ayikho into kuthatha ukuze ndonwabe kuxhaphakile.
Lona kanye kanye ngokungqinelana ne-misconception ukuba uthando ingaba zikho ngaphandle kwenu, kwaye ukuba lenza kuwe ndonwabe phambi kwenu ukulifumana. Oku misunderstanding ikhuthaza abantu abaninzi jonga okhethekileyo umntu ukuba enze nabo baziva wamthanda. Kwi imeko apho uziva yedwa, kulula ucinga ukuba uthando ikhona kuphela ngaphandle ngokwakho. Cinga kwezi iindlela malunga namandla kwi painful umjikelo umnqweno kwaye ebelilindelwe. Ngaba anayithathela mhlawumbi weva kusithiwa"awunokwazi uthando omnye umntu kwi-phambili kuni."Nangona yintoni abantu abaninzi kuthi malunga nayo ukususela lwabantwana abancinane, abantu abaninzi bakholisa ukuba xana la mazwi, nikholelwa ukuba uthando iza xa ufuna kuwa ngothando kunye umntu ongomnye.
Kunjalo ke ayisosine kulula yima ndinovelwano lonely
Mna-uthando ufumana i-obaluleke kakhulu kuzo zonke Ulevi ke abantu, ubunzulu yakho yeemvakalelo zakho ubomi ngokusekelwe uvakalelo uziva kuba ngokwakho. Kuxhomekeke njani ujonga, unako ukuthumela imiqondiso yosasazo malunga nokuba awuqinisekanga abafanelekileyo luthando okanye hayi. Ukuba ngaba uthando ngokwakho, ulungele kuba omnye uthando ebomini bakho - uthando kwabanye. Ukuba ufuna ukufunda ukwenza fertile emhlabeni kuba uthando ebomini bakho, ungafumana ngakumbi uthando yakho imeko-bume. Kodwa ukuba uzama ukufumana ngaphandle apho oku ndinovelwano ivela kwaye oko unako ukutshintsha ebomini bakho ngoko ke ukuba uziva ngaphantsi kuphela, ngoko ke uziva okulungileyo malunga eyakho indlela. Kanye uyayiqonda into yokuba uphelelwe kukunceda kakhulu ukuphila ngaphandle intsingiselo ndinovelwano ka-loneliness, kwaye by ulawulo oko kwenza ukuba uziva yedwa, uza ungafumana into ukuze ube nethemba uza ukutshintsha imeko yakho. Mhlawumbi kukho i-Association ukuba uyakwazi ukungena? Kukho ezahlukeneyo loluntu amaqela: ekuphekeni iintlobo, emidlalo, kwaye ufunda amaqela. Kunzima ukufumana ezantsi yakho loneliness, ungasoloko ukucela uncedo nokuncediswa. Thetha umntu, kokukhona rhoqo kunokuba abantu abaninzi bacinga Uphando lubonisa ukuba abantu ngaphandle iqabane lakho, nokuba ubudala, ingaba ngaphezu nje abantu abakufutshane Dating umntu. Ekubeni a iqabane lakho iqhele kuluncedo kuba ukwenza isakhiwo yakho yonke imihla ubomi, kwaye ngabo ebalulekileyo yinxalenye yakho loluntu womnatha. Kubalulekile ukukhumbula ukuba iqabane lakho ayisiso isiqinisekiso ukuba uza zange kangakanani xa uhamba wedwa kwakhona. Kunjalo, kukho nezinye ezininzi umngcipheko imibandela ukuba unako ukwenza abantu baziva lonely. Kodwa xa kufuneka ahlangane abanye, wena kuba oluntu Phambi ukuzama ukufumana iqabane lakho ngubani onako kuba wayemthanda kwaye wayemthanda, kubalulekile hayi xana ukuba izixhobo kuba ukoyisa loneliness ukuxoka kwi-ezandleni ngokwakho.
Xa uqale ujonge ngaphakathi kwaye ebona ntoni ungenza ntoni ukwenza ngokwakho uzive ngcono, kukho ngcono ithuba ukuba uza kuhlangana umntu ukuba kukhula kunye.
Zam endizithandayo umhleli yithi rhoqo ubhala kuluncedo amanqaku malunga budlelwane nabanye, omnye ubomi, kwaye Dating. Funda ngakumbi amanqaku ukusuka"Lam ncwadi abahleli"candelo.
Isi-Italian omnye abantu - Kuhlangana omnye guys ukusuka Italy
Дон руш ӹдӹр семӹнь ужаш ли
zephondo Dating ividiyo abafazi ividiyo Dating nge-girls fumana incoko roulette ukuphila ngesondo Dating omdala Dating videos ka-girls umfazi ifuna ukuya kuhlangana ividiyo Dating sexy ividiyo Dating nge-girls zonke phezu kwehlabathi free dating ividiyo Dating for free